‘४१ वर्ष लेभी बुझाएकाे नेकपा एमाले त्यसै त्यागेकाे हाेइन’ « AayoMail
2021,18 June, 5:28 pm
पार्टी रहे जो प्रधानमन्त्री हुने हो, मन्त्री हुने हो, मुख्यमन्त्री हुने हो, सांसद हुने हो, मेयर हुने हो, गतिला गतिला नियुक्ति हात पार्ने हो, श्रीमती, भाइ, साला, साली, सासु, आमा, काकी, छोरा, सम्धी, गर्ल फ्रेन्ड, दाजु, दिदी, भिनाजु, बुहारीजस्ता निकटतम आफन्तलाई राजदूत, जिएम, सञ्चचालक बनाउने हो, ठुल्ठूला ठेक्काबाट कराेडाैं कुम्ल्याउने हो। तिनीहरूलाई त यो पार्टी (नेकपा एमाले) चाहिएको छैन भने तपाईं-हामी ‘एक भोट’ हाल्ने निकम्माहरू चाहिँ किन उफ्रीउफ्री पार्टी-पार्टी भनिरहेका छाैं हँ?
यो पार्टी फुटेर के देशै डुब्छ? आकास खस्छ? एमाले भन्ने पार्टी नभएका देशहरूमा विकास भएको छैन? अमेरिका, जापान, जर्मनी, अस्ट्रेलिया, नर्वे, स्वीजरल्यान्ड, बेलायतजस्ता देशमा पनि एमाले भन्ने पार्टी छ? त्यसैले हामी पनि यस्तो भ्रमबाट मुक्त बनाैं। यी लडे पनि लडून् र मरे पनि मरुन्, जनताले यिनको यो भागबण्डे खेलमा चासो राख्न चटक्कै छाडिदिऊँ। दुई-चार वटा नियुक्तिको भागबण्डामा कुरो मिल्यो भने यी भोलि नै मिल्न पनि बेर लाउँदैनन्। अनि ङिच्च गरेर फोटो खिचेर फेरि हामीलाई नै बेवकुफ बनाउन बेर लाउन्नन्।
तपाईंले के पाउनुभएको छ र बेकारमा यो पार्टीका लागि आफ्नो प्रेसर बढाउनुहुन्छ? यहाँ कामसमेत नपाएर विदेशिनुभएको छ, कोही बोलेको छ तपाईंको श्रमको सम्मानमा? कुनै नियुक्ति पाउनुभएको छ? कुनै लाभको पदमा हुनुहुन्छ? कराेडाैं आर्थिक सहायता बाँडिदा तपाईंलाई कसैले सम्झियो? कि औषधी उपचारको पैसो पाउनुभयो? अनि के ‘खाइ न पाइ, छालाको टोपी लाइ’ भने झैं बुरुक्क बुरुक्क उफ्रिनुहुन्छ पार्टी-पार्टी भन्दै? पार्टीले तपाईंलाई कहिल्यै सम्झेको छ? छातीमा हात राखेर सोच्नोस्- तपाईंको कुनै काम छ पार्टीमा? अझ तपाईं पनि मजस्तै पुरानो संगठित एमाले हो भने त अब झन् मजाले किनारा लाग्नुभए हुन्छ। कसैले खोज्नेवाला छैन तपाईंलाई अब।
‘वन साङ्लोले घर साङ्लोलाई खायो’ कामरेड। अब त बादल र राजेन्द्र कामरेडहरूका कुराहरू मात्र बढी सुनिनेछ पार्टीमा। उहाँहरूकै योगदानले मात्र पार्टी अडिएको छ, कुरो बुझ्नुभो नि! त्यसैले बरु चुनाव होस् र, आगामी चुनावमा ‘हामी मूलधारका हाैं’ भनेर घमण्डी बनेका सबै पार्टीका गरेर २ सयजति यी कुरूप र पुराना अनुहारलाई तलै गाउँमै ठेगान लगाइदिऊँ। जमानत नै जफत हुने स्थितिमा पुर्‍याइदिऊँ। अनि बल्ल सुरु हुनेछ हाम्रो राजनीतिक शुद्धीकरणको अभियान।
नेपालका लागि अब नेपालीले नै केही गर्नुपर्छ। यी ‘कम्फर्टेबल’ १२ बुँदे र ;नागरिकताका व्यापारीहरू’ बाट अब केही हुनेवाला छैन। यी ‘लेण्डुपहरू’ बाट अब यो देश जोगिँदा पनि जोगिँदैन। आफ्नै हातमा ‘मताधिकार’ को माैका आएका बेला पनि उही पुरानै ठाउँमा भोट हाल्ने हो भने चाहिँ अब जे गरे पनि नेतालाई गाली गर्न पनि छाडाैं। मेरा कारणले नै यो देश खोक्रिँदैछ, म आफैं मासुभात, केही दिनको ज्याला र १०/२० लिटर पेट्रोलमा बिकेका कारणले नै यो मान्छेले देश लुट्ने लाइसेन्स पाएको हो भनेर आफैं चित्त बुझाऔं, पछुतो मानाैं र घरै बसिरहाैं।
पुनश्च: आवेशमा आएर तत्कालै तातो टिप्पणी नगरिदिनु हुन पनि म सबै साइबर सेनाज्यूहरू समक्ष हार्दिक अनुरोध गर्दछु। जुन बेला मैले तत्कालीन नेकपा मालेको सदस्यता लिएकाे थिएँ, सयद त्यो बेला तपाईंहरू मध्ये धेरैजसो त जन्मनु पनि भएको थिएन होला। पार्टीमा ४१ वर्ष रहेर लेभी बुझाएको र टाउकोमा कात्रो बाँधेर ज्यानै जोखिममा राखेर सारा भूमिगत कामहरू गरेको हुनाले यो मेरो गहिरो अनुभव बोलेको हो, कसैको प्रायोजित २/४ पेगको राग बोलेको होइन।
(पूर्वप्रशासक तथा साहित्यकार ढकालकाे फेसबुक स्टाटसबाट साभार)